अब म चुप लागेर बस्दिन, नेताहरुको भण्डाफोर गर्छु – पूर्व डिआईजी खरेल - Nepal Insider
Home/भिडियो/अब म चुप लागेर बस्दिन, नेताहरुको भण्डाफोर गर्छु – पूर्व डिआईजी खरेल
अब म चुप लागेर बस्दिन, नेताहरुको भण्डाफोर गर्छु – पूर्व डिआईजी खरेल
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले देश र जनताका लागि खटिरहने बताएका छन्।
आइजिपी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै राजीनामा दिएका खरेलले नेपालन्युजलाई भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै सेवाबाट राजीनामा दिए पनि अब चुप लागेर नबस्ने देश र जनताको सेवामा खटिरहने बताए।
उनले आफ्नो जागिरको करियर, नेताहरुको बेइमानी र संगठन प्रमुखको निरीहता लगायत विषयमा मुख खोलेका छन्।
यो पनि…बालबालिकालाई धेरै समय स्कुलमा राख्नुहुन्छ ? यसरी पर्छ सिकाइमा असर
हामीले बालबालिकालाई सिर्जनशील बन्न सिकाउँदै छौँ वा कडा अनुशासन ? सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
कलिला बालबालिकालाई विद्यालयमा राख्दा सिकाइमा प्रतिकूल असर पर्ने जानकारको सुझाव छ ।
लामो समय स्कुलमा समय बिताउँदा थकानका कारण न अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रभावकारी हुने गर्छ न त शिक्षकले पढाएको नै प्रभावकारी हुन्छ– डा. शाक्य थप्नुहुन्छ । यस्तो हुनु उनीहरूको मानसिक तनावको विषय हुने उहाँले जानकारी दिए ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा यलु जोशीले लेखेका छन् ।
देशमा फेरी ठुलो परिवर्तन हुँदै, मंसिर १ गते नेपालमा ज्ञानेन्द्रलाई फेरी राजा बनाउन यति ठुलो प्रयास हुँदै, राजा बन्ने लगभग पक्का (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्नुहोस्)
सालिकराम पुडासैनि मृत्यु प्रकरणमा रबि लामिछाने फस्ने गरि आयो प्रहरीबाट यस्तो सुचना !(हेर्नुहोस भिडियो)